Usayimbe ngqi iGqomu uDJ Lag – The Ulwazi Programme
ULwazi Asanda Gwala odume ngelikaDJ Lag unguDJ aphinde abe ngumdidiyeli wamarekhodi aseThekwini osezinze phesheya e-United Kingdom (UK) ngenxa yomsebenzi. uDJ Lag ozalwe elokishini lase-Clermont uthathwa njengenkosi yomculo weGqomu, ungomunye wabantu ababambe iqhaza elikhulu ukuvula indlela emkhakheni wolo mculo kusukela uqala ngo-2010.
Usayimbe ngqi kulomkhakha weGqom’ uDJ Lag yize abantu abaningi bebengabaza ukuthi lisazoqhubeka yini isasasa lalo mculo ngemuva kokuduma kwaMapiano. UDJ Lag akaconsi phansi kubathandi bomculo weGqomu lapha eMzansi naphesheya kwezilwandle. Izingoma ezisemgangathweni kubalwa kuzo i- “Ice Drop”, “Siyagroova” ayahambisana kuyo noDJ Tira, “My Power” kaBeyonce, “Samba Ngolayini” yeWorst Behaviour ehamba phambili ezindaweni zobumnandi, kanye nazinye.
Isigqi somculo kaDJ Lag sesimenze wahlanganyela nabaculi abaningi abahlukene bakuleli nabasemazweni angaphandle. Lokhu kubonakale nangesikhathi isigqi somculo wakhe uba yinxenye yokunandisa kukaBeyonce noJay-Z emncimbini we-Global Citizen Festival ngo-2018. Italente likaDJ Lag lenze wangcina ebe ngumkhiqizi/projusa wesigqi sengoma (kaBeyonce) “My Power” eqhukethe abaculi abanjengo Nija (New Jersey), Yemi Alade (Nigeria), Tierra Whack (America) kanye nezindlokukazi zeGqom uBusiswa noMoonchild Sanelly bakuleli.
UDJ Lag usebe inxenye yemincimbi yomculo eyahlukene njenge, singabala i- Boiler Room (Johannesburg), Eletronic Music Festival (Cape Town), Afropunk (New York City), #GqomIsThePresent Tour, Something for Clermont, kanye neminye. Uphinde abe uDJ ku-Rinse FM isiteshi somsakazo sase-London kanti useke waba naku-BBC Radio 1 khona phesheya.
Italente likaDJ Lag kwiGqomu liyabonakala. Uma ethi “umculo weGqom wenza ucabange ubumnandi” (www.blackmajor.co.za) akaqambimanga. Izingoma zakamuva ethi “Siyagroova” nethi “Samba Ngolayini” okukhona kuyo no Okmalumkoolkat zikuveza obala lokho. Ukubizwa ngenkosi yeGqomu kumfanele ngeqhaza alibambile kuleli naphesheya kwezilwandle.
Umthombo ngabe: www.blackmajor.co.za kanye ne-Wikipedia.